Japanese Cooking Archives - Page2of2- Neo Mars International
July 29, 2021 July 29, 2021 by adminin Japanese Cooking
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ အစားအစာဖြစ်တဲ့ ဆူရှီဟာ အရွယ်အစားအရရော၊ အမျိုးအစားအရပါ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့ အိမ်တွေမှာ မကြာခဏ လုပ်စားလေ့ရှိတဲ့ ဟိုစိုမာ့ကိ ထမင်းလိပ်ကို ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ပြသပေးသွားပါမယ်။
ဟိုစိုမာ့ကိဆိုတာ ရှာလကာရည်နဲ့ နယ်ထားတဲ့ ထမင်းကို ရေညှိပြားပေါ်မှာ ဖြန့်ခင်းပြီး ကျစ်နေအောင် လိပ်ထားတဲ့ ဆူရှီပါ။ လိပ် ပြီးတော့မှ ၃ စင်တီမီတာ အရှည် အပိုင်းလေးတွေ လှီးရပါမယ်။
ထမင်း ၃၀၀ ဂ၇မ် (၁၈ ကျပ်သား)
ရေ ၄၀၀ မီလီမီတာ (နို့ဆီဘူး ၁ ဘူးခွဲကျော်ကျော်)
သကြား စားပွဲဇွန်း တစ်ဝက်
စည်သွတ်တူနာငါးဘူး ၃၀ ဂရမ် (၂ ကျပ်သားခန့်)
ရေ စားပွဲဇွန်း တစ်ဝက်
ကင်ပြီးသား နိုရိရေညှိ ၁၀ ခု (အလျား ၂၀ စင်တီမီတာ၊ အနံ ၁၀ စင်တီမီတာ)
တူနာငါးစိမ်းအလွှာ ၆၀ ဂရမ် (၄ ကျပ်သားခန့်)
အူမဲဘိုးရှိ ၁ လုံး (ရှာလကာရည်စိမ်ထားတဲ့ မက်မန်းသီး)
ပြုလုပ်ရန်ကြာချိန် 30 minutes.
ဆူရှီထမင်း ရအောင် နယ်ပါ။
အရင်ဆုံး ဆူရှီထမင်း ဒါမှမဟုတ် ရှာလကာရည်နယ်ထားတဲ့ ထမင်းကို ပြင်ပါမယ်။ ဆူရှီ ထမင်းအတွက် ရှာလကာရည်ကတော့ ဆန်ရှာလကာရည်၊ သကြားနဲ့ ဆားကို ရောမွှေရင်ရပါပြီ။ ပြီးရင် ချက်ပြီးခါစ ထမင်းပေါ်ကို စက်ဝိုင်းပုံစံ‌ ဆူရီရှာလကာရည်ကို ဆမ်းလိုက်ပါ။ ၁ မိနစ် ၂ မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ ထမင်းခဲတွေကို တစ်စိစီ ဖြစ်သွားအောင် ညင်ညင်သာသာလေး မြန်မြန်မွှေရင်း ထမင်းထဲကို ရှလကာရည်ဝင်အောင်ထည့်ပါ။ ထမင်းအငွေ့တွေ ပျယ်ပြီး အပူဓာတ်ပျောက်သွားတဲ့အထိ ထမင်းကို ပန်ကာလေနဲ့ အအေးခံထားပါ။ ထမင်းကို အထက်အောက် လှန်ပြီး အပူငွေ့ လုံးဝ မရှိတော့အောင် ပန်ကာနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် အအေးထပ်ခံပါ။ ပြီးရင် ထမင်းကို ခြောက်မသွားအောင် ပလတ်စတစ် အပါးစနဲ့ ထမင်းတွေကို ဖုံးအုပ်ထားရပါမယ်။
ကြက်ဥခေါက်ကြော်လုပ်ဖို့အတွက် ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲမှာ ကြက်ဥကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပြီး၊ သကြား၊ ဆားနဲ့ ရေအားလုံးပေါင်းထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ။ ပြီးရင် လက်ကိုင်ပါတဲ့ ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီပါးပါးလေးသုတ်ပြီး အိုးကို အပူပေးလိုက်ပါ။ အိုးပူလာရင် ခေါက်ထားတဲ့ ကြက်ဥကို တစ်ဝက်လောင်းထည့်လိုက်ပြီး အိုးအောက်ခြေတစ်ခုလုံး ပြန့်သွားအောင် အိုးကိုစောင်းပြီး လှည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် အပူချိန်လျှော့ပြီးတော့ ကြော်ပါ။
ကြက်ဥကို အောက်ကနေ ကော်ယူလို့ရလောက်အောင် ကျက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဂေါ်နဲ့ပါးပါးလေး လိပ်ယူလိုက်ပါ။ ကြက်ဥကို လိပ်ယူပြီးသွားရင် အိုးထဲကို ဆီထပ်သုတ်လိုက်ပြီး ကြက်ဥခေါက်ထားပြီးသား ကျန်တဲ့ တစ်ဝက်ကို လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ ကြက်ဥကြော်ကို ကိုယ့်ဘက်ကို မြန်မြန်လေး လိပ်ယူရပါမယ်။ လိပ်ထားတဲ့ ကြက်ဥကို စဉ်းတီတုံးလိုမျိုး မျက်နှာပြင်ပြားပြားတစ်ခုပေါ်မှာ တင်လိုက်ပြီး ၁ စင်တီမီတာ စတုရန်းအရှည် အလိပ်လေး ဖြစ်အောင် လှီးရပါမယ်။
တူနာ စိုဘိုရိုလို့ ခေါ်တဲ့ ငါးမွှေလုပ်ဖို့အတွက် အိုးတစ်လုံးထဲကို သကြား၊ ပဲငံပြာရည်နဲ့ ရေ ရောထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် တူနာငါးမှာရှိတဲ့ အရည်ဓာတ်တွေကို စက္ကူလက်ကိုင်ပဝါကိုသုံးပြီး စုပ်ယူ ဖယ်ရှားပါ။ အားလုံးရောထားတဲ့ အဲဒီတူနာ ငါး အိုးကို အပူချိန် အတော်လောက်နဲ့ တည်ပြီး အစိုဓာတ်တွေအားလုံး အငွေ့ပျံသွားအောင် စောင့်ရင်း မွှေပေးပါ။
သခွားသီးကိုလည်း ၁ စင်တီမီတာ စတုရန်းပုံ အ‌ချောင်းလေးတွေ လှီးထားပြီး တူနာငါးအသားစိမ်း စာရှီမိအလွှာလေးတွေကိုလည်း ၁ စင်တီမီတာ အထူလှီးထားပါ။ မက်မန်းသီးကိုလည်း အစေ့ထုတ်ထားပြီး လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ အပိုင်းပိုင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ထားပါ။ (ကိုယ်သုံးမယ့် နိုရိ ရေညှိဖတ်က အပြားကြီး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် တစ်ဝက်ဖြစ်အောင် ပိုင်းဖြတ်ထားပါ။)
ဂျပန်လို မာခီဆုလို့ ခေါ်တဲ့ ဝါးယင်းလိပ် သေးသေးလေးကို မျက်နှာပြင်ညီတဲ့ပေါ်မှာ ဖြန့်ခင်းပြီး ဆူရှီလိပ်လုပ်ဖို့ အဲဒီဝါးယင်းလိပ်လေးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကနေ နိုရိရေညှိဖတ်ကို ခင်းထားရပါမယ်။ ဝါးယင်းလိပ် မရှိဘူးဆိုရင် အဲဒီအစား ပလတ်စတစ်အစကို သုံးပြီး လိပ်လို့ရပါတယ်။
ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲမှာ ရေထည့်ပြီး ရေစိုလက်ကိုင်ပဝါတစ်ခု ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဆူရှီထမင်းလိပ် ၁၀ ခု လုပ်ပါမယ်။ လက်ကို ရေထဲမှာနှစ်ပြီး ရေစိုဝတ်နဲ့ သုတ်ရပါမယ်။ ထမင်းလိပ် တစ်လိပ်လုပ်ဖို့အတွက် ဆူရှီထမင်း ၇၀ ဂရမ် ကို ခပ်ပြီး ရေညှိဖတ်ပေါ်မှာ ညီညီလေး ဖြန့်ခင်းလိုက်ပါ။ တစ်ဘက်အခြမ်းကနိုရိကို ၂ စင်တီမီတာလောက် နေရာ ချန်ထားပါ။ ထည့်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကို ထမင်းရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာ ဖြောင့်တန်းနေအောင် စီပြီး ထည့်ရပါမယ်။
လိပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လက်မနှစ်ဖက်နဲ့ ကိုယ့်ဘက်ခြမ်းက ဝါးယင်းလိပ်ကို မပြီး ယူရပါမယ်။ ကျန်တဲ့ လက်ချောင်းတွေက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ထိန်းကိုင်ထားရင်း ဝါးယင်းလိပ်လေးကို ကိုယ့်ဘက်က နိုရိအပြား အစွန်းနဲ့ တစ်ဖက်ကနိုရိရေညှိပြား အစွန်းကို ထပ်သွားအောင် ခေါက်လိုက်ပါ။ ခေါက်လိုက်တဲ့အခါ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ထမင်းနဲ့ တစ်ပါတည်းပါလာအောင်ထိမ်းကိုင်ပြီး နိုရိရေညှိပြား အနားနှစ်ဖက်ညီအောင် ထပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ခေါက်ထားတဲ့ ဝါးယင်းလိပ်ကို ညာဘက်လက်နဲ့ ထိမ်းထားရင်း ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ခြား တစ်ဖက်က ဝါးယင်းလိပ်ကို ကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဆွဲထုတ်ရပါမယ်။
ဝါးယင်းလိပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး ဆူရှီထမင်းလိပ်တစ်ခုလုံးကို နိုရိရေညှိအပြား ဖုံးမနေတဲ့နေရာကို သေချာအထဲဝင်အောင် ထပ်လိပ်ပါ။ သခွားသီး၊ ကြက်ဥခေါက်ကြော်၊ နှမ်းနဲ့ မက်မန်းသီးဆားစိမ်၊ ဝါ့စာ့ဘိထည့်ထားတဲ့ တူနာငါးစိမ်းနဲ့ စိုဘိုရို တူနာငါးမွှေ ၅ မျိုးကို သုံးပြီး အစာတစ်မျိုးကို ဟိုစိုမာကိ ထမင်းလိပ် ၂ ခုစီ ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။
လိပ်ပြီးရင် ၃ စင်တီမီတာ အပိုင်းလေးတွေ လှီးဖြတ်ပါ။ မလှီးခင်မှာ ဓားကို အဝတ်စိုနဲ့ တစ်ကြိမ် သုတ်ရပါမယ်။ လှီးပြီးရင် ထမင်းလိပ်တွေကို ဘူးတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ပန်းကန်ပြား တစ်ခုပေါ်မှာ စီပြီး ထည့်လိုက်ပါ။
July 28, 2021 July 28, 2021 by adminin Japanese Cooking
ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ ဂျပန်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “စုကိယာ့ကိ” (Sukiyaki) ဟင်းလျာ ချက်ပါမယ်။
စုကိယာ့ကိ ဆိုတာ အထူးသဖြင့် ထူးထူးခြားခြားအထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေဆိုရင် အိမ်တွေမှာ မကြာခဏ ချက်စားလေ့ရှိတဲ့ ဟော့ပေါ့ဟင်းလျာ တစ်မျိုးပါ။ ဒီဟင်းလျာကို ပုံမှန်အားဖြင့် အမဲသားနဲ့ ချက်လေ့ရှိပေမယ့် ဒီနေ့တော့ အမဲသားအစား ကြက်သားကို အသုံးပြု ချက်ပြုတ်သွားမှာပါ။
၃၀၀ ဂရမ် ရှိတဲ့ အရိုးထွင်ပြီးသား ကြက်ပေါင် ၁ ပေါင် (၁၈ ကျပ်သား)
ဂျပန်ကြက်သွန်မြိတ် ၂ ပင်
ရှီအိတာကဲမှို ၄ ပွင့်
ပဲပြား ၃၀၀ ဂရမ် ၁ တုံး (၁၈ ကျပ်သား)
ရှီရာ့တာ့ကိလို့ခေါ်တဲ့ ဝဥနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲ ၂၀၀ ဂရမ် ၁ ထုပ် (၁၂ ကျပ်သား)
ကြက်ဥ ၄ လုံး (ဝါရိရှီတာ့ အချိုရည်အတွက်)
ပဲငံပြာရည် စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း (၆၀ မီလီလီတာ)
သကြား ၃၀ ဂရမ် (၂ ကျပ်သားခန့်)
ရေ ၂၀၀ မီလီလီတာ (နို့ဆီဘူး တစ်ဘူး မရှိတရှိ)
ပြုလုပ်ရန်ကြာမြင့်ချိန် 20 minutes.
ပထမဆုံး ဝါရိရှိတာ့ လို့ခေါ်တဲ့ စုကိယာ့ကိ အချိုရည် လုပ်ပါမယ်။ ပဲငံပြာရည်၊ သကြားနဲ့ ရေကို ဒယ်အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ထည့်မယ်။ ပြီးရင် အပူပေးပြီးတော့ မွှေမယ်။ သကြားပျော်သွားပြီဆိုရင် မီးပိတ်လိုက်ပါမယ်။
အသားနဲ့ အသီးအရွက်တွေကို လှီးမယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဟင်းလျာထဲ ထည့်မယ့် ပစ္စည်းတွေကို လှီးပါမယ်။ ကြက်သားက အဆီပိုတွေကို ဓားနဲ့ လှီးထုတ်ရပါမယ်။ အဲဒီအဆီကို ဟင်းချက်ဖို့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်သုံးဖို့ သိမ်းထားပါ။ ပြီးရင် စဉ်းနီတုံးပေါ်မှာ ကြက်သားရဲ့ အရေပြားကို အောက်ဘက်ကထားပြီးတော့ ဖြန့်ခင်းထားပြီး အသားပါးတဲ့ အလယ်နေရာလောက်ကနေ တစ်ဝက် လှီးလိုက်မယ်။ ပြီးရင် အဲဒီကြက်သားကို အလျားထားပြီး ထောင့်ဖြတ် စောင်းစောင်းလေးနဲ့ ပါးပါးလေး လှီးထားပါမယ်။ ကြက်သားအလွှာတစ်ခုချင်းစီကို ၅ မီလီမီတာ အထူလောက်လှီးရင် အတော်ပါပဲ။
ပဲပြားနဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်လေးတွေကို လှီးမယ်။
ဂျပန်ကြက်သွန်မြိတ်ကို ၃ စင်တီမီတာအရှည်လေးတွေ လှီးပါမယ်။ ပြီးရင် ရှီအိတာကဲ မှိုတွေကို ရိုးတံဖြုတ်ပြီး မှိုပွင့်ကို ဓားနဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကနေ ထောင့်ဖြတ်ပုံစံလေးတွေ လှီးထားပါမယ်။ ပဲပြားကို ၃ စင်တီမီတာ လောက်တုံးပြီး ထု က ၂ စင်တီမီတာလောက်အရွယ် အတုံးသေးသေးလေးတွေ လှီးထားပါ။
ဆန်ကာတစ်ခုထဲမှာ ရှီရာ့တာကိလို့ခေါ်တဲ့ ဝဥနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲကို ရေစစ်ထားပြီး ၁၀ စင်တီမီတာ အရှည်လောက် ဖြတ်ထားပါ။ ပြီးရင် အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ရေနွေးဆူအောင်တည်ပြီး ရှီရာတာ့ကီကို ၂ မိနစ်လောက် ထည့်ပြုတ်ပါ။ ပြုတ်ပြီးရင် ရေစစ်ထားပါ။
ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာ စားပွဲတင် ဂတ်စ် မီးဖိုဆင်ထားပါ။ အောက်ခြေပြားတဲ့ ဒယ်အိုး ဒါမှမဟုတ်လည်း လက်ကိုင်ပါတဲ့ ဒယ်အိုးကို အဲဒီဂတ်စ်မီးဖိုပေါ်မှာ တင်ပြီး အပူပေးပါမယ်။ ဒယ်အိုးထဲကို စောစောက ဖယ်ထားတဲ့ ကြက်ဆီအနည်းငယ် ထည့်လိုက်ပါမယ်။ တကယ်လို့ ကြက်ဆီမရှိရင်လည်း အဲဒီအစား ဟင်းရွက်ဆီကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဆီက အပူကြောင့် ပျော်သွားပြီ ဆိုရင် အိုးမျက်နှာပြင် တစ်ခုလုံး ဖြန့်ပါမယ်။ အဲဒီနောက် အိုးထဲကို ကြက်သွန်မြိတ် တစ်ဝက်လောက် ထည့်လိုက်ပါမယ်။
ကြက်သွန်မြိတ်က အညိုရောင် ဖျော့ဖျော့လေး ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကြက်ဆီတွေကို ခပ်ထားပြီး မီးပိတ်လိုက်ပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်ကို အိုးတစ်နေရာမှာ စုလိုက်ပြီး ရှီအိတာကဲမှို၊ ပဲပြားနဲ့ ဝ ဥ ခေါက်ဆွဲတွေကို သူ့အစုလိုက်နဲ့ သူ အိုးထဲမှာ စီထည့်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ အဲဒီဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ တစ်ဝက်လောက်မြုပ်တဲ့ အထိ ဝါရိရှိတာ့ အချိုရည်ကို လောင်းထည့်ပါ။ အပူချိန်အတော်လောက်နဲ့ ချက်ပါမယ်။
အချိုရည် ပွက်လာပြီဆိုရင် အပူချိန်ကို လျှော့လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သေချာစောင့်ကြည့်ရင်း ကြက်သားလွှာတွေကို တစ်ခုချင်းစီ ထည့်ပါမယ်။ ကြက်သားတစ်ဝက်လောက် ဒယ်အိုးထဲ ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် ၄ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်အထိ ချက်ပါ။
တစ်ယောက်စာ ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးစီမှာ ကြက်ဥတစ်လုံးစီ ခေါက်ထည့်ပြီး ပြင်ဆင်ထားပါမယ်။ ပြီးရင် ဒယ်အိုးထဲက ချက်ပြီးသား အသားနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ကြက်ဥ အစိမ်းခေါက်ထားတာနဲ့ တို့ပြီးစားလို့ရပါတယ်။ ကြက်ဥအစိမ်းနဲ့ စား မစားကတော့ ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်။ ကြက်ဥ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မရတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကြက်ဥအစိမ်း မကြိုက်တာမျိုးဆိုရင် ဒီဟင်းလျာကို ကြက်ဥ မပါဘဲနဲ့စားနိုင်ပါတယ်။ ကျက်ပြီးသား အသားတွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စားလိုက်လို့ နည်းလာရင် နောက်ထပ် အသားတွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ ဝါရိရှီတာ့ အချိုရည် ထပ်ထည့်ပြီး ချက်နေရင်းနဲ့ စားလို့ရပါတယ်။